तौल घटाउन डाइट चार्ट यसरी बनाउनुहोस्
बुधबार, २ साउन, २०७५
एजेन्सी । अण्डा खानाले शरिरमा पोषक तत्वको पुर्तिमात्र नगर्ने भइ तौल घटाउन पनि मदत गर्छ । यसो सुन्दा आश्चर्य लाग्छ तर यो सत्य हो । अण्डा खानाले तपाईको बढिरहेको तौल कन्ट्रोल हुने तथा कम पनि हुन्छ ।
यसले फास्ट फुडमा नियन्त्रण लिने काम गर्छ भने तपाईको मेटाबोलिजम र बोसो पगाल्ने काममा पनि मदत गर्छ । थाहा पाउनुहोस् ७ दिनको डाइट चार्ट
डाइट चार्टको पहिलो दिन विहान नाश्तामा दुईवटा उसिनेको अण्डा र कुनै पनि फल खानुहोस् । केरा, आँप जस्ता फलहरु लिन सक्नुहुन्छ । यस दिनको दिउँसो ब्राउन ब्रेड लिन सक्नुहुन्छ । रातको खानामा पनि दुईवटा उसिनेको अण्डा खानुहोस् ।
२. डाइट चार्टको दोस्रो दिन बिहान पहिलो दिनको झै गर्नुहोस् । दिउँसोको खानामा ब्राउन ब्रेड कम खानुहोस् । उक्त बखत टमाटर र स्लाइस पनि लिनसक्नुहुन्छ । रातमा पनि दुईवटा उसिनेको अण्डा खानुहोस् ।
३. तेस्रो दिन नाश्तामा उही रुपमा अण्डा लिनुहोस् । दिउँसोमा खाना परिवर्तन गर्नुहोस् । दिउँसो सलादसँग एउटा अण्डामात्र लिनुहोस् । रातको खानामा दुईवटा उसिनेको अण्डा, सुन्तला,अनाररसको जुस र सलाद लिनुहोस् ।
४. डाइट चार्जको चौथो दिन, तपाईको नास्ता उही नै हुन्छ । तर, दिउँसोको खानामा उसिनेको अण्डा र सब्जी खानुहोस् । रातको खानामा अण्डा र सलाद, यदी तपाई मासांहारी हुनुहन्छ भने माछा पनि खाना खान सक्नुहुन्छ ।
५. पाचौ दिन डाइट चार्टमा नास्तामा कुनै पनि परिवर्तन नगर्नुहोस् । तर, दिउँसो भने फलमात्र खानुहोस् । रातमा उसिनेको दुईवटा अण्डा र सलाद खानुहोस् । स्टिम चिकन पनि लिनसक्नुहुन्छ ।
६. डाइट चार्टको छैठो दिन नाश्तामा कुनै पनि परिवर्तन नगर्नुहोस् । दिउँसो टमाटर, सलाद तथा जुस लिनुहोस् । रातमा उसिनेको एउटा अण्डा र राम्रोसँग पाकेको सब्जी खानुहोस् ।
७. डाइट चार्टको अन्तिम दिन विहानको नाश्तामा कुनै परिवर्तन नगरी सोही डाइट खानुहोस् । दिउँसो फलमात्र खानुहोस् । सुन्तला र अन्य फलको जुस पिउनसक्नुहुन्छ । चिकनको केही टुक्रा पनि लिन सक्नुहुन्छ ।
यो डाइट चार्ट अनुसार खाएमा तपाईले सात दिनमा सात पाउण्ड ओजन घटाउन सक्नुहुनेछ ।
'अहिले कसैको आलोचना र टिप्पणीमा समय खर्च गर्ने पक्षमा म छैन'
नेपालको आर्थिक समृद्धिको प्रमुख जगका रुपमा पर्यटन क्षेत्रलाई स्थापित गर्ने सङ्कल्पसहित राष्ट्रिय अभियानका रुपमा मनाउन लागिएको ‘नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०’ शुरु हुन अब दुई साता मात्रै बाँकी छ ।